Unogona here kuisa mudhudhudhu pane RoRo ngarava? - Yangu Mota Kunze
Unogona here kuisa mudhudhudhu pane RoRo ngarava?
Kutumira & Kutakura
Inofungidzirwa Kuverenga Nguva: <1 min
Mazhinji eRoll anowanzo shandiswa paRoll kubva pamidziyo yekutakura anozobvumira midhudhudhu.
Kazhinji kazhinji kwete ivo vanozove nenzvimbo yakatarwa ine racking yakasarudzika iyo yakagadzirirwa kuchengetedza midhudhudhu.
Isu taizogara tichikurudzira kukwirisa mudhudhudhu wako, kunyanya kana bhasikoro riri kutaurwa chiri chinhu chinoreva zvakawanda kwauri.
Asi kune rimwe divi, iyo Roll paRoll off mhinduro kazhinji ndiyo yakachipa kwazvo.
Usazeze kuzadza fomu rezvikumbiro kuitira kuti tikwanise kuraira zviri nani pamusoro penzira yako yekunyoresa muUnited Kingdom.
Pakati pechikamu chekodhi, isu tinogona kupindura chero yemibvunzo yako saka usazeze kupinda mukutaurirana.
Chinyorwa ichi chakabatsira here?
se 0 Regai 0